DEG DEG: Jabuuti Oo Dekedeeda Ku Wareejisay Shirkad Kale | Raxanreeb.net
DEG DEG: Jabuuti Oo Dekedeeda Ku Wareejisay Shirkad Kale
Wararka laga helayo dalka Jabuuti ayaa sheegaya in wixii ka danbeeyey kadib markii dowladda dalkaasi ay iska cayrisay shirkadda DP World ay iminka heshiis cusub la gashay shirkad kale oo laga leeyahay dalka Singapore oo lagu magacaabo Pacific International Lines (PIL).
Shirkaddan cusub ayaa ka shaqeysa isku xirka shixnadaha Konteerada ee dunidda isaga gudba, waxayna xarun cusub ku yeelan doontaa dekedda Doraleh ee dalka Jabuuti.
Shirkaddan cusub ayaa waxay soo dhoweyn doontaa in dalal badan oo ku yaal qaaradda Afrika ay u adeeg doonaan doonaan dekedda Doraleh ee dalka Jabuuti, kadib marka ay shirkaddani salka u dhigto isku xirka Konteenarada Ganacsiga ee isaga kala goosha qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub.
Shirkadda Pacific International Lines (PIL) ayaa lagu soo waramayaa inay si weyn u dhimi doonto khidmada adeegsiga dekedda Doraleh ee dalka Jabuuti, taasi oo meesha ka saari doonta dagaalka shirkadda DP World ee ku wajahan dekeddaha dalka Jabuuti iyo siday u wiiqi laheyd ku xirnaashahooda dunidda.
Lama oga heshiiskan cusubi ee dowladda Jabuuti ay la gashay shirkadda Pacific International Lines (PIL) saameynta uu ku yeelan doono heshiiskii hore ee shirkadda DP World oo damacsan inay dacwad caalami ah ka gudbiso heshiiskii ay dowladda Jabuuti uga baxday.